Zvinyorwa pa Martech Zone kubva kune vandinoshanda navo pakupa kutengesa uye kushambadzira tekinoroji zvigadzirwa, mhinduro, uye masevhisi.
10 Matanho Ekugadzira Anoshanda Uye Anonakisa Ongororo Pamhepo
Chitatu, June 1, 2022 Chitatu, June 1, 2022 Douglas Karr
Maturusi epamhepo ekuongorora akanakisa pakuunganidza uye kunyatso uye kuongorora data. Ongororo yakanyatsoiswa-pamwe chete yepamhepo inokupa iwe unogona kuita, ruzivo rwakajeka rwesarudzo dzebhizinesi rako. Kushandisa nguva inodiwa kumberi uye kuvaka ongororo huru yepamhepo kuchakubatsira iwe kuwana mareti epamusoro ekupindura, uye data remhando yepamusoro uye zvichave nyore kune vanokupindura kuti vapedze. Heano matanho gumi ekukubatsira iwe kugadzira ongororo inoshanda, wedzera mwero wekupindura wako
Gorgias: Mera Iyo Inowanikwa Mari Yenyu Ecommerce Mutengi Sevhisi
Kambani yangu payakagadzira mhando yechitoro chezvipfeko zvepamhepo, takajekesera hutungamiriri kukambani kuti basa revatengi raizove chinhu chakakosha pakubudirira kwedu kwese mukutanga e-commerce chitoro chitsva. Makambani akawanda akanyanya kubatwa mukugadzirwa kwesaiti uye nekuona kuti kubatanidzwa kwese kunoshanda zvekuti vanokanganwa kuti pane chikamu chebasa revatengi chisingagoni kufuratirwa. Sei Mutengi Sevhisi Yakakosha Ku